अर्ब रुपैयाँको आइपीओ आउँदै : कुनको कति कित्ता ? – Satabdi News
होमपेज / विजनेश / बजार / अर्ब रुपैयाँको आइपीओ आउँदै : कुनको कति कित्ता ?
अर्ब रुपैयाँको आइपीओ आउँदै : कुनको कति कित्ता ?
११ कार्तिक, काठमाडौं । पुँजी बजारमा नयाँ कम्पनी थपिने क्रम जारी छ । यसैक्रममा पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अहिले आइपीओ अनुमति माग्ने कम्पनीहरुको संख्या अहिले २२ पुगेको छ । यसमध्ये रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सले प्रिमियममा आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति मागेको छ । रिलायन्सले प्रतिकित्ता २१२ रुपैयाँमा आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति मागेको हो । बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका २२ कम्पनीले (करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) कुल ५ अर्ब ९५ करोड ३२ लाख ८९ हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निष्कासन अनुमति मागेका छन् ।
You have reacted on "अर्ब रुपैयाँको आइपीओ आउँदै : कुनको कति कित्ता ?" A few seconds ago